Faritra Atsimo Atsinanana sy V7V-NAMPIHANTAIN’NY FILOHAM-PIRENENA
Tsy miandry ela. Vantany vao manomboka ny taona 2017, avy hatrany dia nitsidika ny distrikan’i Farafangana, Faritra Atsimo Atsinanana, ny filoha Hery Rajaonarimampianina, omaly. Iny ihany koa mantsy no nanokafan’ny filoham-pirenena ny fitsidihana ireo faritra …Tohiny
Hotontosaina ny zoma 6 Janoary ho avy izao, eny Iavoloha, ny fifampiarahabana tratry ny taona karakarain’ny avy ao amin’ny fitondram-panjakana. Mampiavaka ny lanonana ho an’ity taona ity ny fampihenana hatrany hatrany ireo olona nasaina. Raha …Tohiny
Famerana ny vidin-tsolika-HIDITRA AN-TSEHATRA NY FANJAKANA
Tsy tokony hatao mahagaga intsony ny fiakaran’ny vidin’ny solika satria efa miaina ao anatin’ilay vidin-tsolika tena izy isika amin’izao fotoana izao. Ny vidin’ny iray Barila any amin’ny foibe mpamokatra solika araka izany no mamaritra ny …Tohiny
Fampidirana FRAM-“EZAHINA TSY HISY KOLIKOLY”
Mitohy amin’ity taona 2017 ity ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ireo mpampianatra Fram andiany fahefatra. Mandritra ny volana Janoary no hanangonana ireo isa avy any amin’ny CISCO tsirairay manerana ny Nosy handrafetana ny lisitr’ireo mpiasam-panjakana vaovao …Tohiny